Dookh iyo Doorasho - Qaybtii 4aad. - Boga Wise Man
June 11, 2020 qawdhan
Maygaag cabbaar ayuu sugay inta Deyr si fiican uga boganayo qoraaladii qiimeynta ee laptop-ka.
Bunkiisa ayuu aayar iska cabay isagoo raba inaanu degdegin oo saaxiibkii warka ka sugo. Maygaag deganaanta uma dhalan wuxuuse ahaa mid is-bara deganaanshiiyaha iyo inuu wax sugo.
Deyr cabbaar ayuu ku dul fikiray isagoo raba inaanu sheekada soo socota dhex gelin. Aakhirkii markuu waxoogay fikiray wuxuu arkay in hawsha oo uu is dhaafiyo mooyee aanay ka fursanayn in uu aayar ka baxo isagoon qancin saaxiibkii Maygaag.
Deyr inta uu soo jaleecay dhankii Maygaag ayuu ku yidhi “ma dookh xumid”
Maygaag intuu madaxa lullay “waad garatay soo maaha? Koley magaalada cid aanad aqooni ma jirtee”
“Haa saaxiib inanta waan garanayaa aqoonse iskuma lihin oo xafiis dhib badan oo Women Power la yidhaa ayay ka shaqaysaa. Waa inan qurux badan laakiin sideeda kale ayay u hawl badantahee ma hubtaa inaad rabtid?”
Maygaag kalsoonida uu isku qabo ee badani indhahiisa way ka lalisay hadalka sarbeebta ah ee saaxiibkii hoos dhigay. Wuxuu aaminsanaa inay dumar tahay oo uu maskaxdeeda bedeli karo. Intuu muusooday ama dhoola cadeeyey ayuu ku yidhi “Deyroow saaxiib haa inaan bartaan rabaa arrinkaa ila gal”
Deyr ayaa isagoo yabaalsan madaxa u lulay isagoo u muujinaya inuu aqbalay.
“Haye goormaad I bari?” ayuu Maygaag weydiiyey Deyr. “Saddex cisho isii horta aan wax isku soo xidhxidhee kolkaasaan qorshe dhisi doonaa”. Arrintan qorshe dhisida waxay ku noqotay Maygaag wax uu la yaabay oo aan muhiim ahayn. “Dee hadaad is taqaanaan la hadal uun oo waxaad tidhaa saaxiibkay ayaan ku barayaa, hadhawna I bar miyaanay intaas uun ahayn?”
Deyr waxa isu qaban waayay aqoonta uu leeyahay Maygaag iyo sida aanu u fahansanayn waxyaabaha qaar. “Ma in lagu baro ayaad doonaysaa mise inaad ku guuleysato?” ayuu weydiiyey isagoo yaaban intuu wejiga ururiyey.
Maygaag isagoon weli si fiican u fahamsanayn ayuu hadana is yidhi waxba hala murmin ee u daa siduu doono hawsha haw galo’e. “Haye saaxiib saddexdaa cisho qaado waa caadiye mahadsanidna”
Mar hadii ay dhamaysteen hawshii ay isugu yimaadeen wakhtiga intiisa kale waxay ku qaateen inay ka sheekaystaan hawlaha adduunyada iyo siyaasada Geeska Afrika. Sacad yarena si edeb leh ayuu dhegta u maalayay isagoo raba inaan wax muhiim ahi ku dhaafin su’aal.
Hoodo iyadoo dhididsan ayay kasoo baxday gym-kii dumarka. Sidii caadiga ahayd ma ay asturin timaheedii dheeraa. Dhanka kalena surwaal dhejisa iyo garan ayay xidhnayd. Way la socotay in inamadii gym-ka iyo asxaabtoodu xiligan oo kale marka ay gym-ka kasoo baxdo sugaan oo daawadaan quruxdeeda. Iyaduna waxay ula dhaqantaa inaanay warba u ahayn. Ama way ignore-garaysaa.
Illaa shan iyo toban jirkeedii ayay raga ignore gareenaysay.
Sanad iyo badh ka hor markii ay gym-ka kusoo biirtay ayay dhawr wiil isku dayeen inay la hadlaan oo shukaansadaan. Casharkay u dhigtay ayay kuwii kalena ku cibro qaateen. Mid kamida iyadoo gym-ka la buuxo intuu ayuu isku dayay inuu ka qoslayo markaasay ku tidhi “shaqadaadu walaal ma inaad hablaha gym-ka ka qosliso oo murqaha calooshu shaqeeyaanba”. Galabtaas ayaa ugu dambeysay in wiil dambe isku dayo.
Marmarka qaar waxay is weydiisa waxa magaalada looga waayay wiil hagaagsan oo indhoqabada oo ay u hanqal taagi karto.
Gaadhigeeda ayay gashay kadibna telefanka ayay khadka kusoo celisay. Hoodo waa dadka telefanka khadka ka saara markay gym-ka ku jiraan. Mise waxay ugu tagtay shan missed call oo saaxibaadeed Ikraan ah iyo farriin odhanaysa degdeg ii soo garaac.
Ikraan waa inanta keliya ee ay saaxiib magaalada ka yihiin Hoodo. Ikraan waa reer Hargeysa. Qurux ahaan Hoodo aad bay u kala duwan yihiin muuqoodi laakiin labadooduba way qurux badan yihiin. Halka Hoodo ka dheertahay, Ikraan way gaaban tahay. Halka Hoodo ka dhuuban tahay Ikraan waa dhuc. Weji ahaan Ikraan jiniyad iyo qurux ayay leedahay ama weji lagu soo dhiirado oo ah kuwa carruurtu markay arkaan u qoslaan. Halka Hoodo wejigeedu qurux badan yahay balse laga yara baqdo ama xataa raga kuwa ugu geesisani aanay hore ugu dhicin oo kayara maagaan.
Hoodo iyo Ikraan xafiis ayay kawada shaqeeyaan, walow ay Hoodo ka sareyso boos ahaan oo tahay maamule ku xigeenka ururka Women Power, halka Ikraan tahay maamulaha shaqaalaha ee Women Power.
Shaqaalaha xafiiska oo isugu jira ajaanib iyo Soomaaliba, ayaa la yaabi jiray sida labada hablood u saaxiibeen. Xataa dabeecad ahaan aad bay u kala duwanaayeen labada hablood. Ikraan waxay ahayd qof dadkoo dhami kusoo hirtaan oy adagtay in la helo qof maagaya ama wax ka tirsanaya iyadoo weliba shaqaalaha maamusha. Dhanka kale Hoodo waxay ahayd qof aad looga baqdo iyadoon xataa cidba dhib u geysan dadku dareen didmo ah ka qaataan.
Hoodo telefankii ayay ku celisay saaxibadeed Ikraan.
“You have got a date” ayay ku tidhi iyadoo qoslaysa.
“Have I?” ayay ugu jawaabtay iyadoo qoslaysa. In badan ayay isku dayday Ikraan inay Hoodo barto wiilal balse markii dhawrkii hore ay ka huleeleen ee Hoodo diiratay ayay iska deysay Ikraan inay nin dambe barto.
“Ma xasuusataa ex-kaygii aan kaaga sheekayn jiray Deyr?”
“Haa kii wanaagsanaa hadana ku xumeeyey?”
“Haa kiibaa ila soo hadlay maanta oo saaxiibkii oo ka yimid Hindiya malaa ayaa adiga raba in lagu baro.”
Hoodo intay ka yabaashay ayay saaxibadeed xasuusisay inay arrimahan ka balameen “Naa soonaygii ka balanay maaha inaanad Faarax dambe oo gacmaha ka dhidida aanad I barin”
“Kan siduu iigu ammaanayay waan yaabay. Takale markaan wada soconay xataa wuu iiga sheekayn jiray waa nin maskax badan horta. Waadigii ka heli jiray raga maskaxda badane kan waad soo eegaysaa waa khasab”
Hoodo aad bay u qososhay.
“Adaa raba inaad ex-kaagii dib isu aragtaan saaxiib ee Faarax maskax badan oo reer Hargeysa ah waxbaa ka siya ee adaan kuu yeelayaa anaaba raba inaan ex-kaagii soo arko”.
“Whatever! Naayaa balantu waa habeen dambe”
“Habeen dambe? Alla waxa ku hayaa weynaa saaxiib!”
“Iyagu waxay rabeen laba habeen ka dib laakiin dee arooskii Ayaan ayaynu tegaynaa markaa saasaan habeen dambe uga dhigay”
deyr dookh doorasho HARGEYSA hoodo Ikraan maygaag Sheeko Somalia Somaliland
Previous Post Dana – Qaybaha Koobaad iyo Labaad.
Next Post Dookh iyo Doorasho – Qaybtii 5aad